कृति विश्लेषण : प्रायोगिक आयाम सार्वजनिक | Online Sahitya
२४ बैशाख, काठमाडौँ / कवि तथा समालोचक गीता त्रिपाठीको नयाँ कृति ‘कृति विश्लेषण : प्रायोगिक आयाम’ नामक समालोचना सङ्ग्रहको लोकार्पण समारोह सम्पन्न भएको छ । पुस्तक सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ समालोचक प्रा. राजेन्द्र सुवेदीले नेपाली समालोचनामा एउटा गहन कृति प्राप्त भएको विचार राख्नुभयो र यस्तो गहकिलो कृति प्रकाशनमा ल्याएकामा प्रकाशकलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्का वक्ता डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतमले वस्तुनिष्ठ समालोचनामा इमान्दारीपूर्वक आएकी गीता त्रिपाठीको समालोचना क्षमता विशिष्ट रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । कृतिमाथि गुञ्जनकी महासचिव हिरण्यकुमारी पाठक तथा सदस्य रजनी ढकालले समेत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्तमा भर्खरै दिवंगत हुनुभएकी वरिष्ठ कथाकार देवकुमारी थापाको सम्झनामा मौनधारण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो । गुञ्जनद्वारा आयोजित सो कार्यक्रम संस्थाकी अध्यक्ष गीता केशरीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो ।